सभ्य समाजका लागि धर्मको आवश्यकता - Pradesh Today सभ्य समाजका लागि धर्मको आवश्यकता - Pradesh Today
तुलसीपुर, २४ फागुन । सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि समुदायमा धार्मिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरूरी रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।
योग, ध्यान र प्रणायामले समाज समृद्ध र सुसंस्कृत बन्ने उनीहरूको भनाइ छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं ७ को आयोजना तथा गायत्री परिवार तुलसीपुरको सहआयोजनामा सञ्चालन भएको तीनदने गर्भोत्सव प्रशिक्षण शिविरमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
धर्मले मानिसमा हराउँदै गएको मानवताको विकास गरी सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग पु¥याउने भएकाले धार्मिक कार्यक्रमहरू निकै महत्वपूर्ण हुने उनीहरूले बताए ।
मानिसमा साधना तथा संस्कार हुन अनिवार्य भएको उनीहरूले बताए । शिविरको समापन गर्दै वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष टोपबहादुर केसीले वडालाई नैतिकयुक्त बनाउनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
कुनै पनि ठाउँको समृद्धिका लागि मानिसमा आचरण, चिन्तन, मनन् र सोचन शैली सकारात्मक हुन अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ । योगले मानिसलाई स्वस्थ, स्फूर्त बनाउने गर्दछ ।
ध्यानले मानिसमा सुविचार, सद्भाव र असल व्यवहारको विकास गर्दछ । साधना, संस्कारले मानिसलाई लक्ष्यमा पुग्न सहयोग गर्ने भएकाले पाँच कुण्डीय गायत्री महायज्ञ सञ्चालन हौँ’ उनले भने ‘आगामी वर्ष हामी २४ कुण्डे महायज्ञ सञ्चालनका लागि एकजुट भएर लाग्ने योजना गरेका छौँ ।’
कार्यक्रममा डा. विष्णु अर्यालले योग र व्यायाम र प्रणायाम सबैका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
योग ध्यान र प्रणायाम विज्ञानमा समेत समावेश भएको उनी बताउँछन् । महायज्ञमा समावेश गरिएका पञ्चकुण्ड, वेदमन्त्र, पूजा आरधनाले मानिसको मस्तिष्कलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान मद्दत गर्ने उनले बताए ।
‘भक्ति र साधनामा विज्ञान मिसिएको छ’ उनले भने ‘यसर्थ यस्ता कुरालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत समावेश गरिन आवश्यक छ ।’
सानै उमेरदेखि असल ब्यवहार, संस्कारका कुराहरू सिकाउँदै गएमा समाज समृद्ध बन्न समय नलाग्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रम वडा नं ७ को प्रावि श्रीगैँमा सञ्चालन भएको थियो ।